Martin Odegaard oo seegi doona kulanka Arsenal ee Liverpool | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Martin Odegaard oo seegi doona kulanka Arsenal ee Liverpool
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay la tacaali doonto la’aanta Martin Odegaard kulanka Caawa lugta hore ee semi-finalka EFL Cup ee Liverpool .
Laacibkii hore ee Real Madrid ayaa bishii December si heer sare ah ugu riyaaqay Gunners, isagoo u diiwaan gashaday seddex gool, seddexna caawiye, isagoo u shaxaraxan ciyaaryahanka bisha ee Premier League.
Tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta ayaa shirkiisii ​​jaraa’id ee ka horeeyay ciyaarta ku sheegay in xaalada kooxdu ay tahay mid aad u kacsan sababo la xidhiidha dhaawacyo iyo coronavirus, isaga oo aan magacaabin wax walaac ah oo cusub.
Si kastaba ha ahaatee, Goal ayaa ku warameysa in Odegaard uu seegay tababarkii Khamiista, islamarkaana uusan u raacin kooxda garoonka Anfield, sidaas darteed Gunners ayaa ku qasbanaan doonta inay waydo xidigan.
Warbixintu waxay intaas ku dartay in Emile Smith Rowe iyo Takehiro Tomiyasu sidoo kale la filayo inay maqnaadaan, laakiin waxaa jirta rajo ah in Granit Xhaka uu ka soo laaban doono COVID-19.
Dhanka kale, Liverpool ayaa waxaa sare u qaaday soo laabashadii Trent Alexander-Arnold iyo Alisson Becker ee tababarka ka hor lugtii hore.
Villa Somalia oo war cusub kasoo saartay soo celinta askarta ku...
Muqdisho (Caasimada Online) – Afhayeenka Madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar, oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyada, ayaa ka hadlay xaaladda dhallinyaradii tababarka loogu...
Xubno mucaarad ah oo Kala Qaatay Hogaanka Golaha Shacabka, Sacdiyo oo...
Cabdullahi Maxamed Nuur oo Yaasiin Farey u qabtay inuu 48 saac...
Bernardo Silva oo Heshiis Qarsoodi ah la galay Pep Guardiola.